brazing, annealing, အရည်ပျော်, forging များအတွက်သံလိုက် induction အပူစနစ်
ပင်မစာမျက်နှာ / မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းသော induction အပူ / သံလိုက်သော induction အပူစနစ်
Categories: မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းသော induction အပူ, သော induction brazing စက်, induction ခိုင်မာစေစက်, induction ပါဝါထောက်ပံ့ရေး, အလတ်စားကြိမ်နှုန်းအပူစက် Tags: မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းသော induction အပူပေးစက်, IGBT သော induction အပူ system ကို, သော induction brazing အပူပေးစက်, induction Brazing စက်, induction လုပ်တဲ့စက်, induction heater ထုတ်လုပ်သူ, သော induction အပူ device ကို, induction အပူကိရိယာများ, induction အပူစက်, သော induction အပူ system ကို, induction အရည်ပျော်စက်, သံလိုက်သော induction အပူပေးစက်, သံလိုက်သော induction အပူစနစ်
IGBT သံလိုက်သော induction အပူစနစ်
ကွဲပြားခြားနားသောပုံသဏ္andာန်နှင့်အရွယ်အစား သော induction အပူကွိုင် ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုအပူအလွယ်တကူပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်။
DW-MF-15 induction generator 15KW 23A 1KHz-20KHz လျှောက်လွှာအရ 3phases380V ± 10% 100%
DW-MF-45 induction အပူလှံတံ Forge အရည်ကျိုမီးဖို 45KW 68A 1KHz-20KHz 3phases380V ± 10% 100%
DW-MF-15 သော induction အရည်ပျော်အရည်ကျိုမီးဖို 15KW 23A 1K-20KHz 3phases380V ± 10% 100%
DW-MF-110 induction ခိုင်မာစေသည့်ပစ္စည်း 110KW 170A 1K-8KHz 3phases380V ± 10% 100%
DW-HF-25 စီးရီး DW-HF-25KW-တစ်ဦးက 25KVA 23A 20K-80KHz 3phases380V ± 10% 100%
DW-လှိုင်းနှုန်းသည် UHF-10KW 10KW 15A 100-500KHz 3phases380V ± 10% 100%
၁။ အပူပေးခြင်း (ပူပြင်းခြင်း၊ အပူတပြင်းတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အရည်ကျိုခြင်း)
induction ပူအတုလုပ်တဲ့ အချို့သောအပူချိန်အချို့သောအပူချိန် (အပိုင်းအမျိုးမျိုးတွင်အပူချိန်အမျိုးမျိုးလိုအပ်သည်) ၏အပိုင်းအစများကိုအခြားပုံသဏ္intoာန်များထဲသို့ပုံနှိပ်ခြင်း၊ နှိပ်ခြင်း၊ စက်သို့မဟုတ်အခြားစက်ပစ္စည်းများ၏အကူအညီဖြင့်အခြားပုံသဏ္intoာန်များသို့လုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဆက်စပ်ပစ္စည်း, မီးဖိုချောင်နှင့်စားပွဲပေါ်မှာထည်, အနုပညာထည်, စံအစိတ်အပိုင်း, စွဲစေ, လုပ်ထားတဲ့စက်မှုအစိတ်အပိုင်း, ကြေးဝါသော့ခတ်, rivet, သံမဏိ pin နှင့် pin ကို။
ပူပြင်းခြင်းသည်မတူညီသောသတ္တုများနှင့်သတ္တုအမျိုးမျိုးကိုသတ္တုများနှင့်မချိတ်ဆက်ခြင်းကိုအပူမှတစ်ဆင့်အပူတိုးချဲ့ခြင်း (သို့) အရည်ပျော်ခြင်းနိယာမအပေါ် အခြေခံ၍ ဥပမာ၊ လူမီနီယမ်ပြားနှင့်စပီကာဝိုင်၊ သံလိုက်နှင့်ပလတ်စတစ်ဖြင့်ကွန်ပျူတာရေဒီယို၏ကြေးနီအရောအထည်ကိုဂဟေဆော်ခြင်း။ ပြွန်၊ အလူမီနီယမ်သတ္တုပါး (တံပိုးမှုတ်ခြင်း) တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ motor rotor နှင့် tubular electric heating element ၏တံဆိပ်ခတ်ခြင်း။
အဓိကအားဖြင့်သံ၊ သံမဏိ၊ ကြေးနီ၊ အလူမီနီယမ်၊ သွပ်နှင့်အမျိုးမျိုးသောမြင့်မားသောသတ္တုများအရည်ပျော်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအပူချိန်မြင့်မားစွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သတ္တုအရည်ကိုအရည်အဖြစ်အရည်ပျော်စေရန်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။
၂။ အပူကုသခြင်း (မျက်နှာပြင်မီးငြိမ်းခြင်း)
အမျိုးမျိုးသောဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ကိရိယာများအတွက်ပလပ်စတစ်၊ လိမ်ဖဲ့ခြင်း၊ တူ၊ ပုဆိန်၊
မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းကိရိယာများကိုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ လက်ကိုင်တံတား၊ ပစ္စတင် pin၊ ကွင်းဆက်ဘီး၊ အလူမီနီယမ်ဘီး၊ အဆို့ရှင်၊ ကျောက်လက်မောင်းရိုး၊ Semi drive ရိုး, သေးငယ်တဲ့ရိုးတံနှင့်လမ်းဆုံလမ်းခွကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောလျှပ်စစ်ကိရိယာများ။
အမျိုးမျိုးသောဟာ့ဒ်ဝဲသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများနှင့် shaft, ဂီယာ (ကွင်းဆက်ဘီး), cam, Chuck နှင့်ညှပ်အဖြစ်စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများများအတွက်ငြိမ်းအေး။
ထိုကဲ့သို့သောသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားမှို, မှိုဆက်စပ်ပစ္စည်းနှင့်မှို၏အတွင်းအပေါက်အဖြစ်ဟာ့ဒ်ဝဲမှိုများအတွက် quench ။
3. ဂဟေ (ကြေးဝါဂဟေ, ငွေဂဟေနှင့်ကြေးပြား)
အမျိုးမျိုးသောဟာ့ဒ်ဝဲဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများဖြစ်သောစိန်၊ ပွန်းပဲ့ကိရိယာ၊ တူးဖော်ခြင်းကိရိယာ၊ အလွိုင်းလွှင့်စက်၊ အလွိုင်းဖြတ်စက်၊ ကြိတ်စက်၊
အမျိုးမျိုးသောဟာ့ဒ်ဝဲစက်မှု gadget ၏ဂဟေ: ငွေဂဟေနှင့် သော induction brazing အမျိုးမျိုးသောအမျိုးမျိုးသောသတ္တုများသို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောမျိုးကွဲများဖြစ်သောဥပမာအိမ်သာနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ အအေးကြေးနီတပ်ဆင်ခြင်း၊ မီးအိမ်အလှဆင်ခြင်း၊ တိကျသောမှိုတပ်ဆင်ခြင်း၊ ဟာ့ဒ်ဝဲလက်ကိုင်၊ ဥယျာဉ်မှူး၊ သံမဏိနှင့်သံမဏိ၊ သံမဏိနှင့်ကြေးနီအပြင်ကြေးနီနှင့်ကြေးနီတို့ဖြစ်သည်။
ပေါင်းစပ်အိုးအောက်ခြေဂဟေဆော်ခြင်းအဓိကအားမြို့ပတ်ရထား, စတုရန်းနှင့်အခြားမမှန်လွင်ပြင်အိုးအောက်ခြေ၏ကျစ်ဂဟေဆော်ဖို့အဓိကအားသက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည်အခြားသတ္တုများကိုရိုးရှင်းစွာကြေးနီဖြင့်ဂဟေဆက်ခြင်းနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။
လျှပ်စစ်ရေပူရေနွေးအိုး၏အပူပေး disc ကိုဂဟေဆော်ရာတွင်အဓိကအားဖြင့်သံမဏိပြားများ၊ အလူမီနီယမ်ပြားများနှင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသော tubular လျှပ်စစ်အပူဒြပ်စင်များကိုသံမဏိဂဟေဆော်ခြင်းကိုအဓိကရည်ညွှန်းသည်။
3. မီးလောင်ခြင်း (အပူချိန်နှင့်မော်ဂျူလာ)
အမျိုးမျိုးသောသံမဏိထုတ်ကုန်များမီးလောင်ခြင်းကဲ့သို့သောသံမဏိအင်တုံ၊ ချော်နှင့် extruded ဘူး၊ ခေါက်ထားသောအစွန်း၊ အခိုးအငွေ့စုပ်၊ သံမဏိပြွန်၊
ဂေါက်သီးလုံး၏ခေါင်း၊ cue၊ ကြေးဝါသော့ခတ်၊ hardware ကြေးနီတပ်ဆင်ခြင်း၊ မီးဖိုချောင်သုံးဓါးကိုင်တွယ်ခြင်း၊ ဓါး၊ လူမီနီယံဒယ်အိုး၊
ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း လျှပ်စစ်သံလိုက်သော induction အပူ သို့မဟုတ်တိုတောင်းသောအဘို့အ induction အပူလျှပ်စစ်သံလိုက်သော induction ၏နိယာမအပေါ်အခြေခံပြီးပါဝါကြိမ်နှုန်းပါဝါထောက်ပံ့ရေးတိကျတဲ့အကွာအဝေး၏သို့ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်သတ္တုပစ္စည်းများအပူများအတွက်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်သတ္တုပူအလုပ်လုပ်ခြင်း၊ အပူကုသခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်အရည်ပျော်ခြင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဤအပူပေးသည့်နည်းသည်ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်း (ဥပမာဆေးနှင့်အစားအစာလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသောလူမီနီယမ်သတ္တုပါးကိုတံဆိပ်ခတ်ခြင်း)၊ Semiconductor ပစ္စည်း (ဥပမာ extruded monocrystalline silicon နှင့် auto glass အတွက်အပူပေးသောသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့) တို့နှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။
induction အပူစနစ်၏အခြေခံ AC power source နှင့်အလုပ်အပိုင်းများပါ ၀ င်သည်။ မတူညီသောအပူအရာ ၀ တ္ထုများအနေဖြင့် induction coil ကိုမတူညီသောပုံစံမျိုးဖြင့်လုပ်နိုင်သည်။ ကွိုင်သည်ကွိုင်အတွက်လျှပ်စစ်စီးကြောင်းအရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်သွယ်သည်။ ကွိုင်တွင်ပါ ၀ င်သည့်လျှပ်စီးစီးဆင်းမှုသည်အပူလိုအပ်သောကြောင့်အက်ဒီစီးဆင်းမှုကိုထုတ်လုပ်ရန်အလုပ်အပိုင်းများမှ ဖြတ်၍ သွားသောသံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
manetic သော induction အပူစနစ်၏အားသာချက်များ
အစာရှောင်ခြင်းအပူ: အနိမ့်ဆုံးအပူနှုန်းသည်တစ်စက္ကန့်ထက်နည်းသည် (ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက်အပူနှုန်းရရှိနိုင်သည်) ။
အပူ၏ကျယ်ပြန့်လွှမ်းခြုံ: ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကိုအပူပေးရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည် (မတူညီသောလည်ပတ်မှုပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအနေဖြင့်ဖြုတ်တပ်သော induction coil ကိုအစားထိုး) ။
လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်း၄ င်းကိုပါဝါအရင်းအမြစ်၊ induction coil အပြင်ရေပေးဝေမှုပိုက်နှင့်မြင့်သောပိုက်တို့နှင့်ချိတ်ဆက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးအလေးချိန်ပေါ့သည်။
လွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေးဖြေ - ဒီဟာကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းသင်တတ်အောင်သင်ယူနိုင်တယ်။
အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှု: သမားရိုးကျလေဟာနယ်ပြွန်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းမြင့်ကိရိယာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်းသည်ပါဝါကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၇၀% သက်သာစေနိုင်သည်။ အလုပ်အပိုင်း၏အရွယ်အစားနည်းလေစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းလေလေဖြစ်သည်။
မြင့်မားသောထိရောက်မှု၎င်းတွင်ယူနီဖောင်းအပူကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည်။ (အပိုင်းအစတစ်ခုစီ၏လိုအပ်ချက်အတိုင်းသင့်လျော်သောအပူချိန်ကိုသေချာစေရန် induction ကွိုင်၏အကွာအဝေးကိုညှိရန်သက်ဆိုင်သည်)၊ ပူနွေးသောအပူချိန်နှင့်အကန့်အသတ်ရှိ oxic မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း။
ဘက်စုံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး:၎င်းတွင် overpressure၊ over-current၊ overheat နှင့်ရေပြတ်လပ်မှုအချက်ပြအချက်အလက်များအပြင်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ကာကွယ်မှုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည်။
မြင့်မားသောဗို့အားပပျောက်ရေး: ၎င်းသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တသောင်းအားဗို့အားထုတ်လုပ်နိုင်သည့်အဆင့်မြင့်ထရန်စဖော်မာတစ်ခုမလိုအပ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်အမြင့်ဆုံးလုံခြုံမှုကိုပေးနိုင်သည်။